Safaaradda Mareykanka Ee Somalia Oo War Kasoo Saartay Eedeyntii NISA Ee Haaruun Macruuf -
HomeWararkaSafaaradda Mareykanka Ee Somalia Oo War Kasoo Saartay Eedeyntii NISA Ee Haaruun Macruuf
Safaaradda Mareykanka Ee Somalia Oo War Kasoo Saartay Eedeyntii NISA Ee Haaruun Macruuf
April 5, 2020 F.G Wararka 0
Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ka hadashay eedeyntii Maalin kahor Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA u jeedisay Wariye Haaruun Macruuf Xasan oo ka tirsan laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da.
War qoraal ah oo kasoo baxay Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in Wariye Haaruun Macruuf uu kamid yahay wariyeyaasha ugu saameynta badan kuwa Soomaalida ah uuna ka howgalo Idaacad uu leeyahay Mareykanka.
Sidoo kale Qoraalka Safaaradda Mareykanka oo lagu daabacay Bogga Twitter-ka ayaa waxaa lagu sheegay in weerarka Hay’adda NISA ee Wariye Haaruun Macruuf ay halis gelineyso xoriyadda hadalka iyo madax-banaanida warbaahinta.
“Haaruun Macruuf waa weriye la ixtiraamo oo xirfadle ah oo ka howl-gala VOA, waana mid ka mid ah suxufiyiinta ugu saameynta badan Soomaalida. Weerarada NISA waxay halis gelinayaan xoriyadda hadalka iyo madax-banaanida warbaahinta ee aas-aaska u ah dimqoraadiyadda iyo isla xisaabtanka dowladeed ee Soomaaliya,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya.
Hay’adda Nabadsugida iyo sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa Jimcihii lasoo dhaafay sheegtay inay tallaabo ka qaadeyso Wariye Haaruun Macruuf oo ka tirsan VOA-da, waxaana ay ku eedeysay in uu leeyahay xiriiro khatar ku ah amniga Qaranka, isla markaana uu ku kacay falal ka baxsan anshaxa warbaahinta.
Si kastaba Ha ahaate Hay’adda NISA ma faahfaahin xiriirada halista ku ah Amniga Qaranka ee uu leeyahay Weriyaha ruug-caddaaga ah ee ka shaqeeya Laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, waxna ku qora qeybta Ingiriiska ee VOA.